Pirezidantii itti-aanaan Zimbaabwee Mingaagwee baqatan - BBC News Afaan Oromoo
Pirezidantii itti-aanaan Zimbaabwee Mingaagwee baqatan
Goodayyaa suuraa Emmarsan Maangaagwaa paartiin biyya bulchuu maqfameera jedhu
Pirezidantii itti-aanaan Zimbaabwee duraan Emmarsan Maangaagwaa , kan Kibtata darbee taayitaa isaanii irraa hari'atamanii turan walaansa fayyaatti qabachuun biyyaa baqachu isaanii tumsitoonni dubbatan.
Pirezidanti Roobarti namini waggaa 93, taayitaa koo fudhachuuf turee jechuu itti aanaa isaanii balaaleefatu.
''Mugaabeen yoom akka du'uu baruuf warra raajii himan kan waldaa apostilootaa bira dhaqaniiru. Garuu akka inni duree du'u itti himameera,'' jechuun ture Mugaabeen deegaroota isaatti Roobii darbe kan himan.
Giiftii duree Girees Mugaabee amma abba waarraa ishee bakka bu'uuf qopheeftuudha.
Aaddee Mugaabeenis itti aanaan pirezidaantii taayitaa isaanii irra akka kaafamaniif, ''bofti mataa isaa eessa rukutamu qabaata'' cheechuun dhiibbaa taasisaa turaniiru.
Amma isheen walgahii addaa paartii Zaanu-PF ji'a dhufuutiin akka itti-aantuu pireezidaantiitti ni mudanti jechuun eegamaa jirti.
Paartichis itti-aana pirezidaanti taayitaa irraa kan kaasee Roobii darbe ture.
Obbo Mugaabeenis itti aanaa isaanii kan duraa nama sharrii jechuun paarti keessatti warra kaannii balleessuu waan deemuufan akeekachaniiru. ubbataniiru.
''Nuti yeroo dheeraan dura waan inni barbaadu beekne turre. Garuu isa irraa isiin ittisaa turre. Anatti maxxanu isaatiin akkan gara pirezidaantummaatti dugdatti isa baadhu yaadee ture. Baruu, Indu'uus, taayitaas gadi hin lakkisu,'' jechuun waajiira Zaanu- PF Haaraaretti argamutti deegartoota isaaniif haasawa taasisaniiru.
"Warreen isa waliin walitti dhufeenya qaban kan biraa biras ni geenya jennee abdanna,'' jechuun itti ida'aniiru.
Goodayyaa suuraa Mr Mugaabeen paartii isaanii keessaa shira uumtoota akka qulleessan akeekachisan
Mr Maangaagwee qaanaa dubbachu baatanis, barreefamni fuula shanii isaan akka barreefameefi mallatteefame raabsamees, Pirezidaantii Mugaabeef amanamaa turusaanii dubbata.
Innis namoota biraa ykn warra paartiin osoo hintaane, maatii nama lamaatiin maqa balleessaan irratti raawwatamu isaa dubbataniiru.
Gabaasichi itti aanaan Pirezidaantiichaa gara Zimbaabweetti deebii'uun Mugaabe fi haadha warraa isaanii paarticha to'achuun dhuunfate akka himatan dubbata.
Goodayyaa suuraa Deegartoonno Addee Mugaabee akkasiin gammachusaanii ibsaniif
Kana malees, 'paartiin kan dhuunfaa miti' jechuun qondaaltota Zaanu-Pf paartiichi akka to'atamu heyyamu isaanitiif qeeqaniiru.
''Gocha maraatuu sababii garaa garummaa yaadaa ykn jireenya uummataa geedaruuf yaada gaarii qabaachu qofaatiin miseensa paartii ari'achuufi haquu kana diduu qabna,'' jedheera ibsichi.
Siyaasa Zimbaabwee: Mugaabeen pirezidaantii itti-aanaa biyyattii 'hinamanamne'' jedhe aangoorraa buuse
7 Sadaasa 2017
Ripoortarri Zimbaaabwee odeessa 'uffata jalaa Girees Mugaabeetiif' qabame
'Jijjiirama jiru deggarus rakkoo jiru hunda ABUT qofaatti qabachuu garuu nan morma'
'Uummata keenyaaf yeroo qaqqabuu qabnutti hin qaqqabne'
Magaalaa ji'oota torbaaf magaalaa guddoo Itoophiyaa turte
'Aadde' Billanee Siyyuum naan hin jedhinaa...?
Senegaal Goda-hambaa qarooma gurraachotaa bante
Yakkamaa teessoo elektirikaarratti ajjeefamuu filate
Pireezidantoota Ameerikaa afur teessoo tokko irratti
Humni elektiriikii Laayibeeriyaa harka 60 ta'u 'ni hatama'